Shivaraj Online | जनस्वास्थ्यविज्ञको चेतावनीः ‘कोरोना संक्रमण अब अनियन्त्रित बन्दैछ’ - Shivaraj Online जनस्वास्थ्यविज्ञको चेतावनीः ‘कोरोना संक्रमण अब अनियन्त्रित बन्दैछ’ - Shivaraj Online
जनस्वास्थ्यविज्ञको चेतावनीः ‘कोरोना संक्रमण अब अनियन्त्रित बन्दैछ’
काठमाडौँ – नेपालमा अबको केही दिनभित्रै कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी अनियन्त्रित बन्न सक्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन्।
नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतीय राज्यहरुमा कोरोना संक्रमणले भयावह रुप लिएकोले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरुको चेतावनी छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वमहानिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भरपर्दो परीक्षणबिनै भारतबाट आएकाहरुलाई १४ दिन क्वारेन्टिनमा राखेर घर पठाइएका कारण समुदायस्तरमा संक्रमणको जोखिम उच्च भएको बताए।
उनले छिमेकी मुलुक भारतका सीमावर्ती क्षेत्रमा संक्रमणले भयावह रुप लिएका कारण नेपालमा पनि त्यसले गम्भीर असर पार्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने चेतावनी दिए।
केहीदिनमा कोरोना संक्रमणले अनियन्त्रित रुप लिने हो कि भन्ने चुनौती खडा भएको उनले बताए।
लकडाउन खोलिए पनि कोरोना संक्रमणको दर नेपालमा बढ्न नदिइएको दाबी स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन गरिरहेको छ । तर जनस्वास्थ्यविदहरु परीक्षण कम भएका कारण संक्रमण कम देखिएकोले सरकारी तथ्याङ्कको भर परेर भ्रममा नपर्न जनतालाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
बारा पर्सा लगायत भारतसँग सीमा जोडिएका तराईँका केही जिल्लाहरुमा एकैठाउँमा धेरै संक्रमितहरु देखिन थालेपछि भने सरकार झस्केको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको आशंका गरिएको भए पनि त्यो प्रमाणित भने भइनसकेको बताए।
एकै ठाउमा धेरै संक्रमित फेला परेपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि मास टेस्टिङ गर्ने तयारी भरहेको पनि सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । मास टेस्टिङ भनेको मानिसको संख्या धेरै र आवतजावत धेरै हुने स्थानमा समुदायको संक्रमणको स्थिति थाहा पाउन जनसमुदायमा गरिने परीक्षण हो ।
तर जनस्वास्थ्यविद डा. बाबुराम मरासिनीले मास टेस्टिङ उपयुक्त विकल्प नरहेको बताए।
उनले संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरुको पहिचान गरेर परीक्षण गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरुमा पनि परीक्षण बढाउन उनको सुझाव छ ।
लकडाउन खुलेको भए पनि कोरोना संक्रमण नबढेको तथ्याङ्क दिनहुँ जनतालाई सुनाइरहेको सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम भने कम भइ नसकेको बताएको छ । संक्रमणको जोखिम कत्ति पनि कम नभएकाले उच्च साबधानी अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आग्रह गरे।
पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ५३ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा बसिरहेका ५३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो।
पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप ५३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँका ४८, ललितपुरका ४ र भक्तपुरका १ जनामा कोराना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिए।
उपत्यकामा यति धेरै संक्रमित भेटिएको यो पहिलो घटना हो। काठमाडौँ उपत्याका ५३ सहित नेपालमा थप ३११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो चौबिस घण्टामा ३११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता डा. गौतमले बताए।
उनका अनुसार नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५ हजार १ सय ३९ पुगेको छ। लकडाउन खुलेको साउन ७ गते यता २८ हजार ७२ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा जम्मा १०६९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिए।
पछिल्लो चौबिस घण्टामा १२१ जना आइसोलेसन सेन्टरबाट डिस्चार्ज भएसँगै हालसम्म १३ हजार ८ सय ७५ जना डिस्चार्ज भएका छन् । मृत्यु हुनेको संख्या ४९ पुगेको छ ।